Flim2MM: Lawless (2012)
အရင်ဆုံး ပြောချင်တာက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုသာ ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဇာတ်ကားဆုံးရင် မှတ်ချက်က "မဖြစ်နိုင်တာကွာ" လို့ မှတ်ချက်ချကြမှာပါ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကြည့်စေချင်လို့ မပြောတော့ဘူးဗျာ။
Lawless ဇာတ်ကားက အမေရိကန်မှာ ၁၉၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းက အရက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ခေတ်ကာလကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ ညီအစ်ကိုသုံးယောက် အရက်မှောင်ခိုကူးပါတယ်။ အရက်ပုန်းရောင်းတယ်။ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီအပြောင်းအလဲကြားမှာ စီးပွားရှာတဲ့သူကို အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့အာဏာပိုင်တွေကလည်း ရှိနေပါတယ်။:D
ညီအစ်ကို သုံးယောက်ရဲ့မတူညီတဲ့စရိုက်နဲ့ မေတ္တာကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အလတ်နေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) မင်းသားရဲ့မင်သေသေ ပြောပေါက်တွေက သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင် သမ္ဘာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဗီလိန် သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာကိုလည်း ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ တွေးမိတာကတော့ ဒီညီအစ်ကိုသုံးယောက်ထဲက ဘယ်တစ်ယောက် အသက်ရှင်ကျန်မလဲဆိုတာပဲ တွေးမိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ ခံယူချက်က " ငါတို့ ဘယ်တော့မှ မသေနိုင်ပါဘူး....ဘယ်အရာကမှ ငါတို့ကို သတ်လို့မရဘူး " တဲ့ဗျာ။
ကဲ.. IMDB 7.3 ရထားတဲ့ ဒုစရိုက်ဇာတ်ကားကြီးကို ခံစားကြည့်ရအောင်လား...
[FORMAT]:………………………….:[ 1280p HDRip x264 , 640p MP4
[FILE SIZE]:……………………….:[ HD- 966 MB , Small- 481 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 1280 x 536, 640 x 480
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[1h 56mins
[Translate By]:……………………..:[ R!B
Posted by Y Junction at 4:50:00 AM
Labels: Crime, Drama, Hollywood